नयाँ बर्ष काहाँ घुम्न जाने योजनामा हुनुहुन्छ ? घुम्नैपर्ने ठाउँ पोखरा ! - CNN EXPRESS
नयाँ बर्ष काहाँ घुम्न जाने योजनामा हुनुहुन्छ ? घुम्नैपर्ने ठाउँ पोखरा !
२०७७ पुष १७ गते, शुक्रबार
पोखरा । संघीय गणतान्त्रिक नेपालको ४ नं. प्रदेशको राजधानी समेत रहेको नेपालकै सर्वाधिक लोकप्रिय पर्यटकीय गन्तव्य हो पोखरा । प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण पोखराले स्वदेशी र विदेशी पर्यटकलाई आकर्षीत गरीरहन्छ । भूकम्प र नाकाबन्दीले सुस्ताएको पोखराको पर्यटन नयाँ वर्षको २०२१ फेरि रमणीय बन्न थालेको छ । आन्तरिक पर्यटकको आगमनसँगै पर्यटन व्यावसायीहरु उत्साहित बनेका छन्।
के तपाईं पनि नयाँ वर्षमा पोखरा घुम्न आउँदै हुनुहुन्छ ?
यदि पहिलोपटक आउँदै हुनुहुन्छ भने पोखरामा घुम्नैपर्ने ठाउँको बारेमा जानकारी नहुन सक्छ । हामीले पोखरामा आएर घुम्न छुटाउनै नहुने केही ठाउँहरुको बारेमा जानकारी गराउने प्रयास गरेका छौं ।
पोखराको पहिलो आकर्षण भनेकै फेवाताल हो । पोखरा घुम्न आउने कोही पनि फेवातालमा बोटिङको मज्जा लिन छुटाउदैनन् । फेवातालको बीचमा रहेको तालबाराही मन्दिरले आकर्षण थपेको छ । बाराही देवीको शक्तिले तालको बीचमा टापु बनेको र तालको बीचमा रहेका कारण तालबाराही हुन गएको विश्वास छ । यो मन्दिर नेपालका प्रमुख शक्तिपीठमध्ये एक मानिन्छ । फेवातालमा माछापुच्छ्रे हिमालको छायाँ देखिन्छ । जुन अत्यन्तै मनमोहक हुने गर्छ ।
डेभिड फल्स रपातले छाँगो
पोखराको अर्को आकर्षण हो, डेभिड फल्स अर्थात पातले छाँगो । पोखराको रहस्य तथा अदभूत आकर्षणको थलो मानिन्छ । फेवातालको पानी डेभिड फल्सको गल्छीबाट गुप्तेश्वर गुफा हुँदै सेती नदितर्फ बग्दछ। पानीको भेल गल्छीभित्र पसेको देखिदा साँच्चिकै मनमोहक हुने गर्छ ।
पोखराको छोरेपाटनमा रहेको गुप्तेश्वर गुफा अन्डरग्राउन गुफा हो । करिब ६ सय मिटरभित्र प्रवेश गरेपछि पाताले छाँगो नजिकबाट देख्न सकिन्छ। गुफाभित्र गुप्तेश्वर महादेवको दर्शन गर्न सकिन्छ । वर्षाको समयमा दुर्घटनाको डरले छाँगो नजिक जान दिइन्न।
फेवातालमाथिको डाँडामा अवस्थित सेतो गुम्बा पनि स्वदेशी विदेशीको आकर्षणको केन्द्र मानिन्छ । पोखराको घुमफिर गर्ने ठाँउ मध्ये सेतो गुम्बा पनी एक हो । यहाँबाट पोखराको शुन्दर दृश्य, फेवाताल, हिमाल, सराङकोट लगायतका सुन्दर दृश्यहरु देख्न सकिन्छ।
पोखरामा रहेको विन्दावासिनी मन्दिर नेपालकै चर्चित मन्दिरमा पर्छ । यो मन्दिर दर्शन गरेर सराङकोटतिर जान पायक पर्छ । सानो थुम्कोमा रहेको विन्दवासिनी मन्दिरमा भक्तजनको ठूलो भिड लाग्ने गर्छ । विन्दावासिनी मन्दिर सुन्दर र सफा रहेको छ ।
पोखरा पुगेपछि सराङकोट पुग्नैपर्ने ठाउँ हो । यहाँबाट पोखरा शहर सिंगै देख्न सकिन्छ । साथै, आँखै अगाडि माछापुच्छ्रे, अन्नपूर्ण, धौलागिरी लगायतका हिमश्रृंखलाहरु प्नि हेर्न पाइन्छ । प्याराग्लाइडिङ सराङकोटबाट नै हुने गर्छ । सराङकोट पोखराको मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य बनेको छ ।
चरोजस्तै आकाशमा उडेर मज्जा लिन प्याराग्लाइडिङ गर्न छुटाउनु हुँदैन । पछिल्लो समय प्याराग्लाइडिङ पोखराको मूख्य आकर्षण बनिरहेको छ । पोखरा घुम्न जाने जो कोहिले प्याराग्लाइडिङमा उड्दै पोखरा, हिमाल र आसपासको क्षेत्र हेर्दै मज्जा लिन सकिन्छ । सराङकोटबाट उड्ने प्याराग्लाइडिङ फेवातालको किनारा लेक साइडमा ल्यान्डिङ हुन्छ ।
सराङकोटबाट हेम्जासम्म जीप फ्लाई गराइन्छ । एक पटकमा दुईजनाले गर्न सकिने जीप फ्लाई युवायुवती र नयाँ जोडीका लागि आकर्षण बनेको छ । जीप फ्लाई गर्दा हेम्जाको सुन्दर गाउँ, जंगल र हिमश्रृंखला अवलोकन गर्दै सराङकोटबाट हेम्जा झर्न पाइन्छ ।
बेगनास र रुपा ताल
लेखनाथ नगरपालिकामा रहेका बेगनास र रुपाताल हेर्दा अचम्म लाग्ने साच्चिकै तारिफ गर्न योग्य छ । डाँडावारी बेगनास र डाँडापरी रुपाताल रहेको छ । पोखराबाट अलि टाढा भएपनि बेगनास ताल अवलोकनका लागि छुटाउनै नहुने ठाउँमा पर्छ ।
महेन्द्र गुफा पोखरा अवस्थित एक प्रसिद्ध र निकै चर्चित गुफा हो । महेन्द्र गुफा नजिकै अर्को चमेरी गुफासमेत रहेको छ । महेन्द्र गुफा पुगेपछि चमेरी गुफा पनि अवलोकन गरेर फर्किन सकिन्छ । घना जंगलको छेउमा अवस्थित महेन्द्र र चमेरी गुफा पुग्दा रोमाञ्चकारी अनुभव हुन्छ ।
साँघुरो र गहिरो खोँचबाट बगेको हुँदा सेती नदी पोखराको अर्को आकर्षण हो । सेती नदीले धेरै पर्यटकको ध्यान खिच्ने गर्छ । हिउँदमा पानी कम बग्ने हुँदा देख्न मुस्किल पर्ने भए पनी बर्षायाममा भने पानी माथि आउने हुँदा सहजै देख्न पाइन्छ ।
पोखराको बिचबाट बगिरहेको सेती नदी एकपटक अवलोकन गर्नैपर्ने ठाउँ हो । सेती नदी पुलबाट सेतो पानी वगेको देख्न सकिन्छ । सेतीलाई अझ स्पष्ट हेर्नका लागि रामघाट पुग्नु पर्ने हुन्छ । रामघाटमा भने ठूलो बगर भएको हुँदा बाहिरबाटै स्पष्ट रुपमा सेती नदी हेर्न सकिन्छ ।
पोखरामा घुम्नका लागि अर्को उपयुक्त ठाउँ हो, माटेपानी गुम्वा । माटेपानी गुम्वा
पोखरा क्षेत्रीय हस्पिटलदेखि पूर्वी तर्फ पर्दछ।
यहाँबाट पनि पोखराको शुन्दर शहर तथा निर्माणाधिन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल समेत देख्न सकिन्छ।
पोखराको अर्को आकर्षण हो, अल्ट्रालाइट फ्लाइट । अल्ट्रालाइटमा उडेर पोखरा शहर तथा हिमश्रृंखला हेर्न पाइन्छ । पोखराम घुम्न जाँदा अल्ट्रालाइटमा उडेर प्राकृतिक सुन्दरताको मज्जा लिनुको वेग्लै मजा छ ।
पोखराको हेम्जामा टावरसहितको बञ्जीजम्म सञ्चालनमा आइसकेको छ । तुलनात्मक रुपमा भोटेकोशीको बञ्जीजम्प भन्दा आधा होचो भएपनि यहाँबाट फाल हाल्दा पनि बेग्लै मज्जा महशुस हुन्छ । पोखरा पुग्ने धेरै पर्यटक बञ्जी गरेर फर्किने गर्छन् ।
पामे रफेवाताल किनार
फेवातालको पश्चिम किनारमा रहेको पामे पोखरा पुग्ने पर्यटकले पुग्नैपर्ने ठाउँ हो । यहाँ सराङकोटबाट उडेको प्याराग्लाइडिङ ओर्लने गर्छन् । फेवातालका गतिविधिहरु अवलोकन गर्दै माछाको स्वाद चाख्नका लागि पामे प्रख्यात रहेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय संग्रहालय
पोखरा पुगेपछि हेर्नेपर्ने अर्को ठाउँ हो, अन्तर्राष्ट्रिय प्रर्वतीय संग्रहालय । यहाँ पर्वतीय पर्यटनसँग जोडिएका कला, संस्कृति, भेषभुषा र वस्तुहरु प्रर्दशनीमा राखिएको छ ।
पोखरा माथिल्लो मुस्ताङ, मुक्तिनाथ, अन्नपूर्ण वेस क्याम्प, गुरुङहरुको सुन्दर वस्ती रहेको घान्द्रुक लगायतका विभिन्न स्थानमा ट्रेकिङका लागि प्रवेशद्वार समेत हो ।
Previous: राष्ट्रिय सभाका १ सांसद र ५ कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि
Next: बादलमाथिको मन्दिर मुक्तिनाथ, घुम्नै पर्ने ठाउँ